မမသီရိ: June 2009
ဒီအကြောင်းအရာလေးက ကျမခေါင်းထဲ ရောက်ခဲ့တာတော့ အတော်ကြာပါပြီ။ ခုတလော အလုပ်ရှုပ်၊ ခေါင်းရှုပ် နဲ့မို့ စာရေးရတာ ခက်ခဲပါတယ်။ စာရေးရတဲ့ ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုက ကျမအတွက် ကဗျာရေးရတာနဲ့ စာရင် ပိုမို ခက်ခဲသလို ခံစားရပါတယ်။ ကဗျာကျတော့ ရင်ထဲ ခံစားလာရတဲ့ အချိန်၊ ကာရံတွေ ခေါင်းထဲ ပေါ်လာတဲ့ အချိန် ဘယ်နား ဖြစ်ဖြစ် စာရွက်ပိုင်းလေးနဲ့ ခဲတံ တချောင်းရရင် ချရေးထားလို့ ရတာမျိုးမို့ အခက်အခဲ မရှိလှပေမဲ့ စာရေးမဲ့ အလုပ်ကျတော့ (ကိုယ် မကျွမ်းကျင်တာ.. အဖြစ်မရှိတာလဲ ပါမှာပါ..း) .. ကွန်ပျူတာရှေ့ ရောက်မှပဲ ရေးလို့ရတော့မလိုလို .. နားအေးပါးအေးရှိမှပဲ ရေးလို့ရမလိုလို.. စာရွက်ပေါ် ချရေးရတာပဲ .. အဆင်မပြေချင် သလိုလို..း) (ကညစ်နဲ့ရေးခဲ့ရတဲ့ ဆရာကြီး၊ ဆရာမကြီးတွေ ဒီစာ ဖတ်မိ ရင် ကျမကို ရရာ ဆွဲ ကောက်ထုချင်စိတ် ပေါ်မှာ အမှန်..း) ..
ဒီလိုနဲ့ ကျမရဲ့ ဘလော့ဂ်လေးမှာ ကဗျာအရေအတွက်က တခြားအကြောင်းအရာတွေနဲ့နှိုင်းစာရင် ပိုများလာ နေတော့တာ..။ ခု ဒီစာကိုတော့ ရွာသားလေးရဲ့ အမှောင်ခွင်း၍ အလင်းဆောင်အံ့ ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေး ဖတ်ပြီး ကဲ ..ဒီတခါ တော့ ရေးပြီကွ လို့ .. အားတင်း ရေးလိုက်တာပါ။ သူ့ပို့စ်လေးက စာကြည့်တိုက်အကြောင်း ဦးတည်ရေးထားတာပေမဲ့ အဲဒီပို့စ်ရဲ့ တနေရာမှာ မလေးသွားပြီး အလုပ်လုပ်မဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ဘာသာစကား အားနည်းချက် ကို ထည့်သွင်းရေးပြ ထားပါတယ်။ ခု ကျမရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ က ကျမရဲ့ ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက်လေးပါ။ ဘာသာစကား အားနည်းနေတဲ့ လူငယ်တွေ .. ဘာသာစကား တခု ဘယ်လို လေ့လာရမလဲ လို့ လမ်းစ မတွေ့ နိုင်သေးသူ လူငယ်လေးတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ကျမတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက အေ ဘီ စီ ဒီ အဆင့် အင်္ဂလိပ်စာကို ၅ တန်းရောက်မှသင်ရတာပါ.. ကျမရဲ့ ဘိုးဘိုး မကြာခဏ ပြောခဲ့သလို ကျမတို့တွေ ခေတ်ပျက်ကြီးထဲ လူဖြစ်လာခဲ့တယ် ပြောရမယ် ထင်ပါရဲ့.. အဲဒီတုန်းကပညာရေးစံနစ်က အတော့်ကို ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ အနေအထားမှာမရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျမနေခဲ့ရတာက တောကျောင်းလေး ဆိုတော့ ပို ဆိုးပါတယ်။ ဆရာတွေ ဆရာမတွေ စေတနာထားပြသပေမဲ့ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကြီး မကြိုက်တာနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ကိုပါ မုန်းခဲ့ကြပြီး မြန်မာစာသည် တို့စာ - မြန်မာစကား သည်တို့စကား ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကြီး ကို လက်မလွှတ်ချင်ခဲ့သေးတာကြောင့် စံနစ်ကိုက အဆင့် သိပ်မရှိတာမျိုးမှာ၊ ဆရာ ဆရာမ မလုံလောက်တဲ့ အားနည်းချက်ပါ ထပ်ပြီး ဖြည့်စွက်လိုက်တော့ ကျမတို့ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အဆင့်က တကယ့် ဘုရားစူး အင်္ဂလိပ်စာ။ အဲဒီ ကံဆိုးသူတွေရဲ့ကြားထဲမှာ ကျမ ကတော့ နဲနဲ မဆိုးလှဘူးပြောရမှာပါ.. ကျမ အဖေက မြန်မာစာ မတတ်ပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်လို ရေးတတ်၊ ဖတ်တတ်၊ ပြောတတ်မို့လို့ ကျမ ကျတော့ အလယ်တန်းဆင့် မရောက်ခင်ထဲက နဲနဲပါပါးတော့ ယဉ်ပါးနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါကလဲ အနူတောက လူချောအဆင့်ပါ.။ တကယ့်ထိထိရောက်ရောက်မဟုတ်ခဲ့။ ကျမ ခုထိ မှတ်မိနေသေးတယ်.. အဲဒီတုန်း verb forms, word forms တွေ ကို ဦးစားပေးပြီးသင်တော့ short question, long question တွေက အားနည်းပါတယ်.. ကျမ က အင်္ဂလိပ်စာ ဝေါဟာရနဲ့ စာလုံးပေါင်းက အင်မတန်ညံ့တဲ့သူ. စာကျက်ကလဲ အတော့ကို ပျင်းတာမျိုးကိုး။ အဲဒီ အင်္ဂလိပ်စာ ကွက်လပ်ဖြည့်ပြီ ဆို ရင် ဆိုကြည့်လို့ အဆင်ပြေတဲ့စာလုံး ထည့်ပစ်လိုက်တာ adj, adv, verb, noun သိပ်စဉ်းစားနေတာ မဟုတ်ပဲ အသံထွက်ကြည့်လို့ ဆိုလို့ ကောင်းရင် ဂွပ် ဂွပ် ဆို ကောက်ရေးပစ်လိုက်တာမျိုး A. B. C Choice တွေ လုပ်ရမယ်ဆို မျက်စိမှိတ် ထည့်ပစ်လိုက်တာမျိုး..း) ။ Grammar တွေ ဘာတွေ လဲ အဲသလောက် ထိနှံ့ နှံ့ စပ်စပ် မဟုတ်ခဲ့။ ဆရာတယောက်ထဲ အတန်း ၂ ခု ၃ ခု ခွ သင်နေရတဲ့ အခြေအနေမျိုး မှာ ကျောင်းသားတွေ စာလိုက်မမီတာ အပြစ်ပြောလို့ ရအံ့မထင်။ ဒီလိုနဲ့ ၁၀ တန်း အောင်တော့ အင်္ဂလိပ်စာ အမှတ်က အများဆုံး ဖြစ်နေခဲ့သေး သရှင်..း)။ တက္ကသိုလ်ရောက်ပြန်တော့လဲ ဘာသာရပ်တိုင်းက မြန်မာ လိုပဲ ဆိုတော့ ကျမနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ဟာ မိုးနဲ့ မြေပမာ ဝေးကွာနေခဲ့တာ အမှန်..။ ဒီလိုနဲ့ ကျမတို့ တက္ကသိုလ် နောက်ဆုံးနှစ်မှာ ကျောင်းတွေ နှစ်ချီ ပိတ်တာ နဲ့ တိုးတော့ ဝေးလံခေါင်သီ ကျေးလက်ဒေသ မှာ ကျောင်းဆရာမလေး ဘ၀ ကို အရှင်လတ်လတ် ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျမရဲ့ ကျောင်းဆရာမသက်တမ်း တလျှောက်လုံးနီးပါးက ကျေးလက်ဒေသတွေ ဆီမှာပဲ ရှိခဲ့တာမို့ ခေတ်ပျက်ထဲက သာမာန် ကျောင်းဆရာမလေး တယောက်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာက Yes နဲ့ No တောင် အနိုင် နိုင်ရယ်။
ဒီလိုနဲ့နယ်စပ်ဒေသမြို့ငယ်လေးတမြို့ရဲ့ အထက်တန်းကျောင်းမှာ ဆရာမ အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် နေစဉ်တုန်းမှာ သင်တန်းတခု တက်ခွင့် ကြုံ ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးသုတေသနရယ်၊ စက်မှု-စိုက်ပျိုးနဲ့ သက်မွေးပညာဦးစီ ဌာန (စက်-စိုက်-သက်) ရယ်၊ ကုလသမဂ္ဂ အေဂျင်စီတခုရယ် ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်တဲ့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် ထောက်ကူပြု သက်မွေးပညာ ဆရာဖြစ်နည်းပြသင်တန်း မှာ တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုန်းက သင်တန်းရဲ့ ကြီးကြပ်ရေးမှူးကြီးက မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးသုတေသနအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး (ထိုစဉ်က)၊ ပညာတန်ဆောင်အဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဆရာကြီး ဦးမြင့်ဟန်ပါ (ခုတော့ဆရာကြီးက ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဘ၀နဲ့ အငြိမ်းစားယူသွားပြီလို့ သိရပါတယ်) ။ ဆရာကြီးဆီက နိုင်ငံခြားပညာတော်သင် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ အများကြီး လေ့လာခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းထဲမှာလဲ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် နေရာတကာ ပါလေရာ နဲ့ ဟောင်ဖွာဖွာ လုပ်တတ်သူကျမကို ဆရာကြီးက ရက်တိုတို အတွင်းမှာပဲ မျက်မှန်းတမ်းပြီး ခင်မင်ခဲ့တာမို့ ဆရာကြီး ကို ဟိုမေး ဒီမေး မေးခွန်းတွေ တောက်လျှောက်မေးနေခဲ့တဲ့ ဆရာမလျှပ်တေးလေး ကြောင့် ပညာတန်ဆောင်ရဲ့ ဆရာကြီးခမျာ သက်တောင့် သက်သာ မရှိခဲ့ရှာပါဘူး။ နိုင်ငံခြားပညာတော်သင် အတွက် အဓိက လိုအပ်တာက အင်္ဂလိပ်စာ မို့လို့ ပညာတော်သင် သွားချင်ရင် အင်္ဂလိပ်စာ ကောင်းနေရမယ် လို့ ဆရာကြီးက ပြောပါတယ်။ ဆိုတော့ ခေတ်ပျက်ထဲ ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အပြင်၊ တောထဲမှာ ရှိနေတာမို့ ကျမရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကို ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရပါ့မလဲ လို့ ဆရာကြီးကိုမေးတော့.. ဆရာကြီးက... သူငယ်တန်းကနေ လေးတန်းထိ အင်္ဂလိပ်စာ ကို ကျေရင် ရပြီတဲ့....။ (ကျမ ၅ တန်းရောက်ပြီး နောက်နှစ်ကစ လို့ မူလတန်းကစပြီး အင်္ဂလိပ်စာ စသင်နေခဲ့ရပါပြီ)။ မူလတန်းဆင့် အင်္ဂလိပ်စာကို ကျေရင် ဆရာမ Report တစောင် ကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရပြီ.. ကျန်တဲ့ ကိစ္စက တော့ သူ့ဖာသာ သူ ဖြစ်လာလိမ့်မယ် လို့ ဆရာကြီးက ရဲရဲ ကြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ သင်တန်းပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ဆရာကြီးရဲ့ စကားက ကျမ ခေါင်းထဲက မထွက်ခဲ့.. ဘယ်လို စ အကောင်အထည်ဖေါ်ရပါ့မလဲ လို့ အမြဲ တွေးနေခဲ့မိတယ်.. အဲဒီကာလမှာပဲ INGO ၀န်ထမ်းတယောက်က သူ့မိသားစုနဲ့ကလေးတွေကို အဲဒီမြို့လေးဆီကို ခေါ်လာခဲ့ပြီး ကျောင်းထားမှာမို့ မြန်မာစကားပြောနိုင်တဲ့ ဆရာမ တယောက်ရှာရင်းကျမဆီ ရောက်လာပါတယ်။ ကျမလဲ လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ ၉ တန်း ၁၀ တန်း ကျူရှင်တွေ ထဲက ဖြုတ်သင့်တာ ဖြုတ်၊ တွဲသင့်တာ တွဲ ပြီး ချက်ချင်း လက်ခံခဲ့လိုက်တယ်..။ ကျမ သင်ပေးရမှာက ပထမတန်း နဲ့ တတိယတန်း..။ ကျမရဲ့ကျောင်းက လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေက မျက်လုံး အပြူးသားနဲ့ ကျမ ကို ၀ိုင်းကြည့်ကြတယ်.. ၁၀ တန်း ကျူရှင် တချို့ လက်လွှတ်ပြီး ဘယ့်နှယ် ပထမတန်း သွား သင်ရတာလဲ ပေါ့..။ ကျမကတော့ ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်မို့ ပြုံးပဲ ပြုံးပြ ခဲ့တယ်။ အဲဒီကလေးတွေ အဲဒီမြို့လေးမှာ နေနေခဲ့တဲ့ ၂ နှစ် မှာ ကျမ မူလတန်း အင်္ဂလိပ်စာ ကျေခဲ့ပြီ.. သာမန်တာဝန်ကျေ .. ပြီး ပြီးရော သဘောမထား ပဲ ကိုယ်တိုင် လဲ လေ့လာ လေ့ကျက်ခဲ့တာမို့ နဲနဲတော့ ဟုတ်ခဲ့ပြီ ပြောရမှာပေါ့..။ သူတို့ ပြန်သွားခဲ့တဲ့ နှစ်မှာပဲ အဲဒီနယ်စပ်မြို့လေးမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့မာလာဝီနိုင်ငံက UNDP Coordinator တယောက်က အရွယ်ရောက်စ သူ့သမီးလေးကို HIV AIDS တွေအရမ်းခေတ်စားနေတဲ့ အဲဒီမှာ အဖေနဲ့ စိတ်မချလို့ ဆိုပြီး မြန်မာပြည်ခေါ်လာပါတယ်..။ အဲဒီ ကောင်မလေးက သူတို့ နိုင်ငံရဲ့ အလယ်တန်းဆင့်ပြီးပြီးတဲ့ ကျောင်းသူလေးပါ မြန်မာပြည်က International School မှာကျောင်းအပ်မယ် ကြံတော့ အဆင့်က မမီ ဖြစ်နေခဲ့လို့ အဲဒီ ၀င်ခွင့်အကြို သင်တန်း ပြင်ဆင်ဖို့ အတွက် ဆရာမ တယောက်လာရှာတော့ အဲဒီမြို့လေးရဲ့ အထကကျောင်းအုပ်ကြီးက ကျမ ကို ညွှန်လိုက်တာမို့ နိုင်ငံခြားသူလေးကို စာသင်ခွင့် ကျမရခဲ့ပါတယ်..။ ကျမ ကံကောင်းခဲ့တယ်ပဲ ပြောရမှာပါ..။ ကြိုးစားခဲ့တာတွေ ပင်ပန်းခံခဲ့တာတွေ က အလဟသ တော့ ဖြစ်မသွားခဲ့..။ ကျမ အတွက် လေ့ကျင့် ဖို့ နေရာတွေ အဆင်သင့် ဖြစ်နေခဲ့တာကလဲ နောက်ထပ် ကံကောင်းတဲ့ အချက် တချက်ပေါ့..။
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ အခါအားလျော်စွာ ရေဒီယို နားထောင်ပါတယ်၊ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတွေတွေ့ရင် ကြိုးစား ဖတ်ကြည့်ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ အလေ့အကျင့်ပါ။
တကယ်တော့ ကျမရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အဆင့်က မူတန်းအဆင့်ပဲ ရှိပါတယ်။ အဲ ကြုံတုန်းလေး တခု ပြောရအုံးမယ်..။ ကျမရဲ့ ဘလော့နယ်နမိတ်ထဲက ကျမသွားလည်နေကျ ဘလော့ဂါတွေထဲမှာ သူတို့ရဲ့ ပို့စ်ခေါင်းစဉ်တွေကို အင်္ဂလိပ်လိုပဲပေးတတ်ကြတဲ့ထူးထူးခြားခြားဘလော့ဂါ ၂ ယောက်ရှိပါတယ်။ မခင်ဦးမေနဲ့ ကိုဂျူလိုင်အိပ်မက် ပါ။ ကိုဂျူလိုင်လေးနဲ့ ကျမ စခင်ကြတော့ သူက သူ့ပို့စ်လေးတွေ မတင်မီတိုင်း.. အမ.ရေ ဘာခေါင်းစဉ်လေးပေးရရင် ကောင်းမလဲ.. ဟို စာလုံးလေးရဲ့ အဓိပါယ်က ဘာလဲ.. အဲဒါကို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ စသဖြင့် မေးခွန်းလေးတွေ မေးလာတယ်.. ကျမ သူ့ ကိုရှင်းပြပါတယ်.. မောင်လေးရေ အမ အင်္ဂလိပ်စာ က မူလတန်း အဆင့်ပဲ ရှိတာနော် လို့.. ဒါပေမဲ့ သူက မေးနေခဲ့တာပါပဲ..(တကယ်ပဲ မေးချင်တာလား အမြင်ကပ်ပုဒ်မနဲ့ ပညာလာစမ်းတာလားတော့မသိ..း) ကျမမယ် သူမေးလာရင် ဘေးနားက အဘိဓါန် စာအုပ်ကြီး ပြေးလှန်ရ.. လုပ်လက်စ အလုပ်တွေ ရပ်ပြီး စဉ်းစားရ နဲ့... နောက်ဆုံးတော့.. ကျမရဲ့ တချိန်တုန်းကဒုက္ခတခု တင်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းကျမှ ဘာမှ မေးမလာတော့ တာ..း)..။ သူ့အမ အရည်အချင်း သိသွားခဲ့တာကိုး..း)။ Laughing နဲ့ Loving ကို တောင် နားရည်မလည်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကျမဘ၀ .. အဲဒီမှာ သူ အသေအချာ သိသွားတော့တာလေ..း)။
ကဲ. ကျမနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အကြောင်းပြန်ကောက်ရရင်.. ဘာပဲပြောပြော ခုနေခါမတော့.. ကျမ နဲ့ ဆုံဖူးတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတိုင်းနီးပါးက မင်း အင်္ဂလိပ်စာ ဘယ်မှာ လေ့လာခဲ့တာလဲ လို့မေးတာမျိုးခံရတဲ့ အပြင်.. ကျမရဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အတွက် လစဉ်၊ နှစ်စဉ် အစီရင်ခံစာတွေ.. လုပ်ငန်း အစီအစဉ်တွေ နဲ့ လုပ်ငန်း အဆိုပြုလွှာတွေ ကို နိုင်ငံခြားသား အရာရှိတွေ၊ လုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ နားလည်အောင် ရေးနိုင်တဲ့၊ ရှင်းပြနိုင်တဲ့၊ ဆွေးနွေး နိုင်တဲ့ အနေအထား တခု ကို ရောက်နေခဲ့ပါပြီ။
ကျမ..အင်္ဂလိပ်စာ နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာသင်တန်းမှ မတက်ဖူးပါဘူး..။ ကျမဘ၀ရဲ့ ကာလ အတော်များများ က ကျေးလက်ဒေသတွေ ဆီမှာပဲ ကုန်လွန်ခဲ့ရတာပါ.။ ဒါပေမဲ့ မူလတန်းဆင့် အင်္ဂလိပ်စာကိုပဲ အလေးအနက် လေ့လာခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ကျမ ဒီနေ့ ဒီနေရာမှာ မျက်နှာပန်း လှလှ ရှိနေခဲ့ရပါတယ်။ ကျမရဲ့ အတွေ့ အကြုံလေး ကို ကျမရဲ့ ၀န်ထမ်းလေးတွေ တပည့် တပန်းတွေ ကို တစိုက်မတ်မတ် မျှဝေခဲ့တာမို့ ခုဆက်သွယ်လို့ ရနေတဲ့ တချို့ကလေးတွေဆိုတကယ့်ကို တိုးတက်နေခဲ့တာ ကျမသိခဲ့ရပါတယ်..။ ဒီစာလေးကို ဖတ်မိသူ လူငယ်လေးတွေအတွက် အကျိုးကျေးဇူး တခုခု ရမယ် ဆိုရင် ကျမ မျှဝေရကျိုး နပ်ပါတယ်။
ကင်ညာမှာ ဂျပန်ဘာသာစကားသင်ဆရာမ သွားလုပ်ဖူးတဲ့ ကျမနဲ့ Project တခုမှာ အတူ တွဲလုပ်ဖူးတဲ့ ဂျပန်မလေးကပြောဖူး တယ်.. ဟေ့ အဂ်လိပ်စကားလောက်များကွာ.. ၅ လုံး တတ် ကမ္ဘာ ပတ်လို့ ရတယ် ကွ.. တဲ့... Hello!, Thank you., Yes., No., Good Bye!.. ပါတဲ့...း)..။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ စကားလုံးတွေ ကို နေရာ တကျ ပြောတတ်ဖို့ လိုတာကို တော့ သူမလေးက ထည့်မပြောခဲ့...း) တော်နေကြာ.. မင်း ငါနဲ့ လိုက်ခဲ့ မလား လို့ သဘောမကျချင်စရာ ကောင်လေး တယောက်က မေးလာတဲ့မေးခွန်း.. Yes.. သွားဖြေ မိလို့ ကတော့.... အင်း.... မတွေးရဲ စရာ...း)..း).
အဲဒီ မိတ်ဆွေမလေး ဆိုလဲ ပဲ မြန်မာပြည် ကို သူ ရောက်စတုန်းက ဆို တအိအိ တအအ တွေ နဲ့ စခဲ့တာ ပေမဲ့.. သုံး လေး လ လောက် လဲ ကြာရော.. အတော် အဆင်ပြေသွားခဲ့တာ.. သူ့ကိုလဲ ကျမ သူငယ်တန်း မြန်မာ ဖတ်စာအုပ်နဲ့ မြန်မာ ၄ တန်း အင်္ဂလိပ်စာ စာအုပ် ပေးဖတ်လိုက်တယ် လေ.....း)...း) ...ဒါပေမဲ့ သူ့ချစ်သူ ဂျပန်လေး ကျတော့ အင်္ဂလိပ်လို ရေးတဲ့ Report ကို သာမန် အင်္ဂလိပ် တယောက် ထက် ကောင်းအောင်ရေးနိုင်တဲ့အပြင် သူ့ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်စာတွေ များ ၁ လက္မခွဲ လောက် ကို ထူ သရှင်...။
[တကယ်တော့ ကျမတို့ငယ်ငယ် တုန်းဆီကနဲ့ နှိုင်းစာရင် ဒီဖက်ခေတ်မှာ အင်္ဂလိပ်စာ၊ အင်္ဂလိပ်စကား အပါအ၀င် နိုင်ငံရပ်ခြား ဘာသာစကားသင်ကြားမှု၊ လေ့လာမှု တွေ က အများကြီး တိုးတက်နေပါပြီ၊ စာအုပ်စာတမ်းတွေ၊ သင်တန်းတွေ ဆိုလဲ နေရာမရွေး မြင်တွေ့ နေရပြီ၊ လူငယ်တွေ ကလဲ ပိုမို မျက်စိပွင့် အမြင်ကျယ်လာကြပြီ။ စာသင်ကျောင်းတွေက သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေမှာလဲ (မျိုးချစ်စိတ်၊ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်၊ နိုင်ငံရေး နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမှန်တရား မြတ်နိုးလိုစိတ်တွေ နိုးကြွစေတဲ့ စာတွေကအားနည်းနေတာ၊ သမိုင်းတချို့ကို မှေးမှိန်ဖုံးကွယ်ထားတာ၊ ကိုယ်လိုချင်တာ ကိုယ်ဆွဲရေးထားတဲ့ သမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကိုပဲ ဖေါ်ပြပြီး အဖြစ်မှန်တချို့ကို အမှောင်ချခံထားရတာလွဲလို့.) ဘာသာစကား၊ အထွေထွေဗဟုတနဲ့ နည်းပညာတွေပိုင်းဆိုင်ရာတွေ က ကမ္ဘာကိုရင်ဘောင်တန်းနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်။ ဒီအချက်လေးကိုတော့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာရှာဖွေပြီး အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းနေတဲ့ လူငယ်တွေ၊ အဆင့်မြင့်ပညာတွေ လေ့လာသင်ယူနေတဲ့လူငယ်တွေ ပိုမို သတိထားမိကြမှာပါ။ မြန်မာပေမဲ့၊ တတိယနိုင်ငံက ပေမဲ့ အရည်အသွေး အရည်အချင်းတွေ က မညံ့ပါဘူးဆိုတာ အတော်များများ သက်သေပြနိုင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသေအချာ လေ့ကျင့်ပြုစု ပျိုးထောင်ထားတဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေ နဲ့ ထိရောက်တဲ့ သင်ကြားနည်းစံနစ်တွေ အသုံးပြုမှုကအားနည်းနေသေးတဲ့အပြင် စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေနဲ့ လိုအပ်ချက်တွေလဲ ရှိနေသေးတော့ မြန်မာ့ ပညာရေးက အားရဖွယ်ရာ မရှိသေးတာ အမှန်ပေမဲ့ ဟိုတုန်းနဲ့နှိုင်းစာရင် တော့.....။]
ဒီစာစုလေးဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးသုတေသနအဖွဲ့ မှ အငြိမ်းစားညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပညာတန်ဆောင် အဖွဲ့ ဥက္ကဌ ကြီး ဆရာကြီးဦးမြင့်ဟန်အား ကျေးဇူးတင်ကန်တော့လိုက်ပါတယ်။
Posted by မမသီရိ at 6/29/2009 06:33:00 AM
လိပ်ပြာ မြင်တော့ လွမ်း..
အာရုဏ်ကျင်း ချိန် လွမ်း
အချိန်တိုင်းမှာ လွမ်း.. ....
တကယ်တော့ ကျမ ကိုယ်တိုင်က အတော့ကို လွမ်းတတ်တဲ့သူတယောက်ပါ...
ဒါပေမဲ့ ဒီကဗျာလေးကိုတော့ ကျမနဲ့ဆုံတိုင်း သူ့မှာချမ်းသာတာဆိုလို့
အလွမ်းတွေပဲ ရှိတယ် ပြောတတ်သူ အလွမ်းသူဌေးလေး တယောက်အတွက် ရည်ရွယ်ရေးဖွဲ့ပါတယ်...................။
Posted by မမသီရိ at 6/28/2009 07:40:00 AM
သူ လောကကြီးကို စွန့်ခွာသွားတဲ့အတွက် ၀မ်းနည်းကြေကွဲနေကြမဲ့ သူတွေကတော့ ကျမ ကိုယ်တိုင်အပါ အ၀င် ကမ္ဘာပေါ် က လူသန်းပေါင်းများစွာ ဆိုရင် မှားမယ် မထင်ပါ။
သူဆုံးပြီ ဆိုတော့ ကျမ တမိနစ်ကျော်လောက် အံ့သြ ငြိမ်သက်သွားမိတယ်..။ သူက သူ့ ဘ၀ကို ပြန်လည် အဖတ်ဆည်ဖို့ ကြိုးစားနေသူ..။ သူ့ အနုပညာတွေကို လူတွေရဲ့ ရင်ထဲ ပြန်လည်ထည့်ပေးဖို့ ကြိုးစားနေသူ..။ ရှေ့ လမှာ ပဲ သူ လန်ဒန် ကို သွားပြီး ဖျော်ဖြေမှာ.. ခုတော့... ရုတ်တရက်ကြီး.. သူ ထွက်ခွာ သွားခဲ့ပြီ........။
ကျမ ရဲ့ DVD ခွေတွေ VCD ခွေတွေ ထားတဲ့ စင်လေးနား ကျမ ဖြည်းဖြည်းလေး သွားမိတယ်.။ ကျမနှစ်သက်တဲ့ သူ့ MTV အခွေ တွေ အဲဒီမှာ.. ငြိမ်ငြိမ်လေး လဲ လျောင်းလို့...။
သူ့ရဲ့ လပေါ် လမ်းလျှောက် အက
သူ့သီချင်းပေါင်း များစွာထဲက ဘယ်အချိန် နားထောင်ထောင် နားထောင်မိတိုင်း မျက်ရည်ကျမိတဲ့ We are the World.
နားထောင်တဲ့ အချိန်တိုင်း ဆွဲ ဆောင်မှု ရှိနေတဲ့ Beat It.
ခွဲခြားမှုတွေ မြင်တွေ့ရတိုင်း ပြေးသတိရမိတဲ့ Black or White.
ရင်ခုန်ရင်း ဆွေးလျ စေရတဲ့ Remember the Time.
၀င်ရိုးစွန်းမှသည် အီကွေတာထိ တောရော မြို့ပါ မကျန်၊ လူကြီး လူငယ် လူရွယ် ကလေး မကျန် သူ့ကို လူတိုင်းနီးပါး သိကြပါတယ်။ သူရဲ့ တမူထူးခြားတဲ့ သီချင်းဆိုဟန်၊ သူမတူတဲ့ ကကွက်တွေ နဲ့ သူ့ရဲ့ ကျော်ကြား မှုကို ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ပိုင်ပိုင်ကြီး ဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့သူပါ။ လောကဓံ အတက်အကျ ကြောင့် သူရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ပြသနာတွေ အရှုပ်အထွေးတွေ နာမည်ပျက်မှုတွေ ဘယ်လိုပဲ ရှိခဲ့ပေမဲ့ သူ့ရဲ့ ဂီတနဲ့ ဖန်တီးမှုတွေကို မြတ်နိုးနှစ်သက်နေဆဲ လူတွေက သန်းပေါင်းမြောက်များစွာ ရှိနေပါသေးတယ်။ နောင်ရာစုပေါင်းများစွာမှာလဲပဲ သူ့အမည်က လူတွေရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ စွဲမြဲကျန်နေအုံးမှာဖြစ်တဲ့ အပြင်၊ ကမ္ဘာ့မြေပြင်အနှံ့မှာလဲ သူ့သီချင်းတွေ ၀ဲ ပျံနေအုံးမှာ အသေအချာပါ။
ကမ္ဘာကျော် ဂီတ သမားကြီး မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် ကောင်းရာ သုဂတိလားပါစေ။
Posted by မမသီရိ at 6/26/2009 08:15:00 AM
ဆင့်ရင် မိုးထိ.. လွင့်မည့်တောင်တန်း..
တစက်စီစု.. အခုထိ ဆို..
ကို.. ရေ မြင်လှည့်
ရက်ပေါင်း ကြာရှည် ဝေးခဲ့ပြီမို့
မချိ ဒီရင်..တစဉ်စဉ် လွမ်း..
လွမ်းတုန်းမှာ ငို.. စကားဆိုမယ်..
အချိန်တိုင်းဝယ် မမေ့တယ် လို့..
ကာရံဖွဲ့ လွမ်း.. တမ်း တလျက်နေ..
Posted by မမသီရိ at 6/23/2009 11:05:00 AM
စေ့စေ့ တွေးကြည့်တော့ ကျမတို့ မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ အနုပညာဗီဇတွေ
အတော်ပါတဲ့ လူမျိုးတွေပါ။ ရှေးက လူကြီးတွေများ စကားပြောကြရင်
ကာရံလေးတွေ နဘေလေးတွေနဲ့။ အဖွဲ့ အနွဲ့လေးတွေကလဲ ပါလိုက်သေး။
ကွက်စိပ်ဟောဆရာတွေဆို ဟိုတခေတ်ဆီတုန်း မှာ ပွဲတိုင်းကျော် မပါမပြီး ရှင်ပြု
အလှူ၊ နားသ၊ အသုဘ မကျန် အင်မတန် ခေတ်စားခဲ့တာကလား..။
ဘီအီးဒီအောင်သိုက် တို့ ဂီတစာဆိုကိုခင်မောင်ဝင်း တို့ခေတ်စားခဲ့တဲ့
ရေဒီယိုအသံလွှင့် ဇာတ်လမ်းတွေ၊ ကက်ဆက် ဇာတ်လမ်းခွေတွေ ရဲ့
ခောတ်ကလဲ မသေးလှ။ နဘေတွေ ကာရံ တွေ အကြောင်း ပြောတာပါ။
ကျမတို့ရဲ့ ရှေးလူကြီးတွေက စကားပုံတွေဆိုလဲ အဓိပါယ်ပြည့်ဝရုံတင်မက
ဆိုလို့ကောင်းအောင်လှလှ ပပ ရေးခဲ့ ကြတာလေ။
ဘ၀မှာတစုံတခု၊ တစုံတယောက်၊ တစုံတရာ ကိုမကျေမချမ်း မကျေမနပ်၊
ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ ဖြစ်တဲ့ခါမျိုး၊ အံတကြိတ်ကြိတ် ဖြစ်ရတာမျိုးတွေရှိလာတဲ့ခါမျိုးမှာ
တခြားရှိသေးရင် ၀င်ရေးပေးသွား ကြပါ.. ကျေးဇူးတင်ပါမယ်..။
အမြင်မတော် ဆင်တော်နဲ့ ခလောက်
ဘုန်းကြီးရူး နဲ့ လှေလူးနဲ့
လူလွန်မသား ရွာသား မနိုင်
သူခိုးက လူ..လူ.. ဟစ်
ပိုးစုန်းကြူးနဲ့ ဖိုးလမင်း လင်းတာချင်းတူပေမဲ့
သူတောင်းစားပါးစပ် က နတ်စကားထွက်
--- --- --- (အနှုတ်) --- --- ---
-ံ့ -ံ့ -ံ့ -ံ့ -ံ့ (အစား) -ံ့ -ံ့ -ံ့ -ံ့ -ံ့ -ံ့
ဗုံလုံ တလှည့် ငါးပျံ တလှည့်
ပေဖြစ်တုန်းခံ .. တူဖြစ်တော့မှ နှံ
ပတ္တမြားမှန် နွံ မနစ်
(လမ်းဆုံးရင် ရွာတွေ့မယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက် ခုထိခိုင်မြဲနေဆဲပါ)
Posted by မမသီရိ at 6/18/2009 07:44:00 AM
ဖီဒဲလ် ကပ်စထရို ဆိုတာ တခေတ်တခါ က တောက်ပခဲ့ဖူးတဲ့ ကြယ်တပွင့်ပါ..။ အဲဒီခေတ်အခါတုန်းဆီက လွတ်လပ်ပြီးစ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှတလွှားက လူငယ် လူရွယ် အများစု လေးစားအားကျခဲ့ရတဲ့ .. တခြားကမ္ဘာ့ဒေသတွေက လူငယ်တွေကပါ မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့် အကဲခတ်ခံခဲ့ရတဲ့ တော်လှန်ရေးလူငယ် တဦးဖြစ်ခဲ့ဖူးသူပါ။ နှောင်းလူငယ်တွေကတော့ ကပ်စထရို ဆိုတာ သေသည်ထိ အာဏာကို မစွန့်လွှတ်ချင်တဲ့ အာဏာရူးကြီး၊ တယူသန် တဇွတ်ထိုးကြီး၊ တိုင်းပြည်ကို တံခါးပိတ်ထားချင်သူကြီး၊ ပြည်သူတွေကို ထည့်မစဉ်းစားတဲ့တကိုယ်ကောင်းဆန်သူကြီးအဖြစ်၊ ကျူးဘားသမိုင်းစာမျက်နှာတွေကို အညိုရောင်နဲ့အုံ့မှိုင်း စေခဲ့သူကြီးအဖြစ်သာသိထားကြမှာပါး) ။
ခုတင်ပြသွားမဲ့စာစုလေးကတော့..သူ့ရဲ့ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တဲ့လျှောက်လဲချက် တွေထဲက ထုတ်နှုတ်ထားတဲ့ အချက်အလက်တချို့ပါ..။ ကျမဆီမှာရှိနေတဲ့ ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာ-သိပ္ပံ တက္ကသိုလ် ဥပဒေပညာဌာနမှာ ကထိက အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေ စာရေးဆရာ မောင်ကိုယုရဲ့ ကမ္ဘာကျော် လျှောက်လဲချက်များ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲက ကောက်နှုတ်တင်ပြသွားမဲ့ ဖီဒဲလ်ကပ်စထရိုရဲ့ သမိုင်းဝင် လျှောက်လဲချက်ပါ။ အချိန်အခက်အခဲ ကြောင့်ရော..စာဖတ်သူတွေကို အားနာသောအားဖြင့်ပါ.. အပိုင်းလိုက်ခွဲပြီး တင်ပြပေးသွားပါမယ်။
ထိုစာကို သယ်ယူလာသော အမျိုးသမီးမှာ မွန်ကားဒါး တိုက်ပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သော အမျိုးသမီးရဲဘော် တယောက်ဖြစ် သူ ဥပဒေဘွဲ့ရမယ်လ်ဗာဟာနန်ဒက်စ် ဖြစ်လေသည်။ သူမသယ်ယူခဲ့သောစာထဲတွင် ဖေါ်ပြထားသော် အချက်များ မှာလည်း မှတ်သား ဖွယ်ရာ များ ပါဝင်ပါသဖြင့် ကမ္ဘာကျော် လျှောက်လဲချက် ကြီး၏ နောက်ခံဖြစ်ရပ်များ အား စာဖတ်သူတို့ ခြုံငုံမိစေရန် မူရင်း အတိုင်း ပြန်လည်ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
အထက်ဖေါ်ပြပါရုံးတော်၌ ဤအမှုတွဲ အမှတ် ၃၇ အရ ကိုယ်တိုင် ခုခံချေပခဲ့သူ ကျနော်ရှေ့နေ ဖီဒဲလ်ကပ်စထရို ရတ်စ်က အောက်ပါအတိုင်း လေးစားစွာ အဆိုပြုလျှောက်ထားပါသည်။
(၁) အာဏာပိုင်များက ကျနော့အား ဤတရားခွင်တွင် မရှိနိုင်စေရေးအတွက် မဟုတ်မတရားပိတ်ဆို့မှုများဖြင့် ကြိုးစား ပြုလုပ်နေကြပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ ဂျူလိုင် ၂၆ ရက်နေ့ အရေးအခင်းကာလအတွင်း အာဏာပိုင်များ၏ ဖြစ်ရပ်မှန်များအား ဖုံးကွယ်လိုမှု၊ ကလိန်စေ့ ငြမ်းဆင် လီဆယ်ထားမှုများအား ပေါ်သွားမည် စိုးသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကျူးဘားပြည် သမိုင်းတလျှောက် ၌ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းသော ထိုနေ့က သူပုန်သုံးပန့်များအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့သည့် လူသတ်မှုများ၊ တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများကို မပေါ်ပေါက်လာစေရေး ဖုံးကွယ်ထားရန်လဲ ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်သည် ယနေ့နာမကျန်းဖြစ်သဖြင့် တရားခွင်သို့ တက်ရောက်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း လုပ်ကြံလည်ဆယ်ထားသည့် သတင်းတခု ကြားရပါသည်။ အမှန်အားဖြင့် ကျနော့တွင် မည်သည့်ဝေဒနာမှ မရှိပဲ ပကတိကျန်းမာလျက်ရှိပါသည်။ အာဏာပိုင်တို့သည် အလွန်ရှက်ဖွယ်ရာကောင်းသော အမူအကျင့်ဖြင့် ဤသို့ အယောင်ဆောင်လိမ်လည် လှည့်စား သည့်နည်းလမ်း ကို အသုံးပြုပြီး ရုံးတော်ကို စော်ကားနေပါသည်။
(၂) တရားရေးဌာနမှ ထောင်အာဏာပိုင်များသို့ ကျနော့အား ပြင်ပလောကနှင့် အဆက်အသွယ်ဖြတ်မှုများ မပြုလုပ်ရန် အကြိမ်ကြိမ် တားမြစ်ထားသည့်ကြားထဲမှ ပင် အာဏာပိုင်တို့သည် ကျနော့အား ပြင်ပလောကနှင့် လုံးဝ အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်ထားပါသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းမှာဥပဒေမဲ့ ရာဇ၀တ်ကျူးလွန်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်သည် ယခုအခါ ပြင်ပလောကနှင့် လုံးဝ အဆက်အသွယ် ဖြတ်ခံနေရပါသည်။ ၅၇ ရက် အတွင်းတွင် ကျနော်သည် ထောင်တွင်း၌ အလုံပိတ်ခံနေရပြီး.. နေရောင်ကိုပင် မြင်ခွင့်မရခဲ့ပါ။ မည်သူ့ကိုမှလည်း စကားပြောခွင့်မရပါ၊ ကျနော်၏မိသားစုကိုလည်း မြင်တွေ့ခွင့်မရပါ။
(၃) ကျနော့အားကျန်းမာရေး ပျက်စီးချို့တဲ့စေပြီး လုံးပါးပါးစေကြောင်း ကြံစည်လုပ်ဆောင်နေကြကြောင်း အသေအချာလေ့လာသိရှိရပါသည်။ ကျနော်လွတ်မြောက်ထွက်ပြေးသွားမည် စိုးရိမ်သောကြောင့် အကြီးအကျယ် လုပ်ကြံမှုများ၊ မမှန်သတင်းလွှင့်မှုများ၊ စီမံကိန်းအသွယ်သွယ်ဖြင့် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေကြပါသည်။ ............................................................ အခြားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား သုံ့ပန်းများသည်လည်း အလားတူပင် အသက်အန္တရယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။ ထိုအထဲတွင် ဇူလိုင် ၂၆ ရက် လူသတ်ပွဲကြီးတွင် အကြွင်းမဲ့ သက်သေ များဖြစ်သော မိန်းကလေး ၂ ဦးလည်းပါဝင်ပါသည်။
(၄) ကျူးဘားပြည် ဆန်ရှာဂို ဆေးပညာ အဖွဲ့ချုပ်မှ ဥက္ကဌ ကဲ့သို့သော အရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီး ထင်ရှားကျော် ကြားသော ဆရာဝန်များဖြင့် ကျနော့အားချက်ချင်း စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန် အမိန့်ချမှတ်ပေးရေးအတွက် ရုံးတော် သို့ကျနော်မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ ဤရုံးတော်မှ အဖွဲ့ဝင်တရားသူကြီး တဦးကိုအထူးခန့်အပ်ပြီး နိုင်ငံရေး သုံ့ပန်းအကျဉ်းသမားများ၊ ထောင်နှင့် ရုံး အသွား အပြန်ခရီးတွင် လိုက်ပါ ပို့ဆောင်ပေးပါရန်ကိုလည်း ကျနော် အဆိုပြုပါသည်။ ဤအဆိုပြုလျှောက်ထားချက်အသေးစိတ်ကို ဒေသဆိုင်ရာ ရှေ့နေများအသင်း၊ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသားရှေ့နေများအသင်း၊ တရားရုံးချုပ်နှင့် ဤရုံးတော်မှ ဤအချက်အလက်များအား သိသင့်သိထိုက် သည်ဟု ယူဆသော ဥပဒေ ဌာန အသီသီးသို့ ပေးပို့ပါရန်ကိုလည်း မေတ္တာ ရပ်ခံပါသည်။
ဤတရားခွင် ဇစ်မြစ် ရပ်တည်ချက်နှင့် အရေးကြီးပုံတို့က ဤရုံးတော်အား ထူခြားသည့်တာဝန်ဝတ္တရားများ ကိုပေးအပ်ထားပါသည်။ အကယ်၍ ကျနော်ကန့်ကွက်ထားသည့် အထက်ပါအခြေအနေဆိုးများ အောက်တွင်ပင် ဆက်လက်၍ အမှုကိုစစ်ဆေးသွားပါလျှင် တနိုင်ငံလုံးက ဤရုံးတော်ကို (အကျင့်ပျက်) အဖြစ် လှောင်ပြောင် သရော်စရာ၊ အထင်သေးအမြင်သေးစရာ၊ ကဲ့ ရဲ့ ရှုတ်ချစရာ ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။
ကျူးဘား တနိုင်ငံလုံးက ဤတရားခွင်ကို အာရုံပြု ဂရုစိုက်ကြည့်နေကြပါပြီ၊ ဤရုံးတော်က သူ၏တရားစီရင် အာဏာပိုင်ခွင့်ကို တန်ဖိုးရှိရှိကာကွယ်သွားလိမ့်မည်ဟုလည်းကောင်း၊ သူ၏ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိမ်းသိမ်းသွားလိမ့် မည်ဟု လည်းကောင်းကျနော်မြှော်လင့်ပါသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ဤကာလသည် ကျူးဘားပြည်သမိုင်းတွင် တရားရေးဆိုင်ရာအင်အားစုအတွက် ဂုဏ်သိက္ခာမှတ်ကျောက်တင်သည့် ကာလဖြစ်ပါသည်။ ယခုအချိန်ထိ ရုံးတော်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် တရားသူကြီး၏ အဆင့်အတန်းသည် ဤသမ္မတ နိုင်ငံ၏ ဂုဏ်ယူဖွယ် အကောင်းဆုံး၊ ဂုဏ်အရှိဆုံး တရားရုံးတော်အဖြစ် ကျနော်ကိုးစားယုံကြည်မိပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ကျနော်သည် ဤရုံးတော်၏ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် မျက်စိမှိတ် အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ချက်ဖြင့် ကျနော်၏ သဘောထားများအား ဤကဲ့သို့ အဆိုပြုလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျနော့ဖက်ကမူ ကျနော်၏ အခွင့်အရေးအတွက်ဖြစ်စေ၊ ကျနော်၏ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ဖြစ်စေ၊ ကျနော်၏ အသက်ကို ပေးလှူစတေးရမည်ဆိုပါလျှင်လည်း၊ အပြန်တထောင်စွန့်လွှတ်ရန် စတေးရန် အသင့်ရှိပါသည်။ ....စောက်နက်သောဂူတခုအတွင်းမှ တရားမျှတရေး အခြေခံသဘောတရားသည် စစ်တပ်တတပ် ထက်ပင် ပို၍အင်အားကြီးမားပါသည်...။
၁၉၅၃ ခု၊ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်။
မှတ်ချက်။ ။ ဤအဆိုပြုလျှောက်လဲချက်ကို ရုံးတော်သို့တင်ပြရန်အတွက် ဒေါက်တာ မယ်ဗာဟာနန်ဒက်စ် အား ကျနော့ကိုယ်စား တာဝန်လွှဲအပ်လိုက်ပါသည်။
ဤစာကြောင့် အာဏာပိုင်များသည် အထိနာအောင် အလဲထိုးခံလိုက်ရသည့်နောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား မှန်သမျှ တရားရုံးတော်သို့မ၀င်မီ ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး လှန်လှော ရှာဖွေခြင်းခံရသည်။ စာကို ယူဆောင်လာခဲ့သူ အမျိုးသမီး ဒေါက်တာ မယ်ဗာဟာနန်ဒက်စ် အားလည်း အကျဉ်းထောင်အတင်း အလုံပိတ်ထားလိုက်သည်။ အလုံပိတ်ခြင်းခံရပြီးဖြစ်သော ဖီဒဲလ်ကပ်စထရိုအားလည်း ထောင်တွင်းရှိ ပိုမို အဆက်ပြတ် သောနေရာသို့ပို့လိုက်သည်။ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ရုံးတော်ခန့်ဆရာဝန် ၂ ဦးသည်ကပ်စထရိုအားသွားရောက်စစ်ဆေးမှုပြုရာပကတိကျန်းမာလျက်ရှိကြောင်းထောက်ခံချက်ပေးလိုက် သောကြောင့် တရားသူကြီးများက သူ့အား တရားရုံးတော်သို့ သွင်းရန်အမိန့်ချခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် အာဏာပိုင်များက ခွင့်မပြုခဲ့ပေ။
ကပ်စထရို၏နောက်ကွယ်တွင် အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့တိုင်အောင် အမှုကို ဆက်လက်စစ်ဆေးသည်။ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့ ရောက်မှပင် တရားသူကြီးများရှေ့မှောက်သို့ ကပ်စထရိုအားလာရောက် အစစ်ခံခွင့်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော် တရားရုံးတွင်မဟုတ်ပဲ ဆေးရုံကြီးရှိ သူနာပြုဆရာမများ အပန်းဖြေ ခန်းတွင်ဖြစ်သည်။ ကပ်စထရို၏အသံကို ကျူးဘားပြည်သူများ မကြားရစေသောငှာ တရားခွင်ကို လျှို့ဝှက်စွာ စစ်ဆေးခဲ့သည်။ တရားခန်းခွင်အတွင်း၌ တရားသူကြီး ၃ ဦး၊ အစိုးရရှေ့နေ ၂ ဦး၊ သတင်းများအား စစ်ဆေး အတည်ပြုချက်ဖြင့် ပေးပို့ရသည့် သတင်းထောက် ၉ ဦးသာရြှိပီး လက်နက်ကိုင် အစောင့်အရှောက် ၁၀၀ စောင့်ကြပ်ဝိုင်းရံထားခဲ့သည်။
ဤတရားခွင်၌ ဖီဒဲလ်ကပ်စထရိုက နောင်တွင် ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သည့် ၅ နာရီကြာသူ၏လျှောက်လဲချက် ရှည်ကြီးကိုလျှောက်လဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဂုဏ်သရေရှိတရားသူမင်းခင်ဗျား..၊ တခါဖူးမျှမကြားဖူးသေးတဲ့ အခြေအနေတရပ်ကတော့ ပေါ်ပေါက် နေပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေက တရားခ့တယောက်ကို တရားရုံးရှေ့ ခေါ်ထုတ်ဖို့ ကြောက်ရွံ့ နေကြ ပါတယ်။ လက်နက်မပါတဲ့ တကိုယ်တည်းသီးခြားချုပ်နှောင်ထားခြင်းခ့နေရတဲ့၊ မဟုတ်မတရား စွပ်စွဲခြင်း ခံနေရတဲ့ အကာအကွယ်မဲ့ လူတယောက်ရဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ကြောက်လန့်တကြား ဖြစ်ပြီး တုန်လှုပ်နေတဲ့ အာဏာပိုင်အစိုးရ အဖွဲ့ရှိ ဒီအစိုးရဟာ တိုင်းပြည်ကိုသွေးနဲ့ရင်းပြီး အကြမ်းဖက် အုပ်စိုးနေတဲ့ အာဏာကို အကြမ်းဖက်ရယူထားတဲ့ အစိုးရဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစိုးရဟာ ကျနော့ဆီက အခွင့် အရေး မှန်သမျှကို ရုပ်သိမ်း ပိတ်ပင်ခဲ့ရုံမက၊ ကျနော့ကို တရားခံ အဖြစ်သူတို့စွဲဆိုထားတဲ့ အမှုကိုတောင်မှ တရားခွင်တင်ဘို့ ငြင်းဆန်ခဲ့တဲ့ အစိုးရဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်ဟာ ပုဂ္ဂလိက တဦးချင်း လွတ်လပ်ခွင့်တွေကို ရုပ်သိမ်းထားတဲ့ကာလ၊ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးအမိန့် ကြီးကို အစွမ်းကုန်အသုံးပြုပြီး၊ ရေဒီယို သတင်းစာ စတဲ့ ဌာနတွေကိုလဲ ဖြတ်တောက် စစ်ဆေးချုပ်ချယ် နေတဲ့ ကာလဖြစ် နေရက်နဲ့ ဒီလိုကာလမျိုးမှာ တရားခံတယောက်ရဲ့အသံ တရားခံ တယောက်ရဲ့စကားကို အကြောက်ကြီး ကြောက်နေရလောက်အောင် ဒီအာဏာရှင်အစိုးရဟာ ဘယ်လောက်တောင်တုန်လှုပ် ချောက်ခြားဖွယ် ကောင်းတဲ့ ရာဇ၀တ်မှုကြီးမျိုးတွေကို ကျူးလွန်းပြီးပြီလဲ ဆိုတာကိုတော့ စဉ်းစားကြည့် ရင်မြင်နိုင်ကြမှာပါ။ အုပ်စိုးသူအစိုးရ ရဲ့ဆန္ဒအရ၊ တရားစီရင်သူတွေရဲ့ အားနည်းချက်အရ၊ ဥပဒေမဲ့နည်းလမ်းတွေ လျှို့ဝှက်လုပ်ကြံဖန်တီးချက် အမြောက်အများတွေရဲက အကျိုးရလဒ်ကတော .................. ခုဒီတရားခွင်မှာ ကျနော်ပြောသမျှစကား တွေ ဘယ်သူတွေကမှ မလေ့လာနိုင်အောင် မသိရှိနိုင်အောင်၊ ကျနော့အသံတွေကို ပိတ်ဆို့စီမံထားပါပြီ.....ဒီလိုဆိုရင် ကျနော်တို့ ဘာလို့ တရားလွှတ်တော်အဆောက်အဦကြီးကို ဘာကြောင့်ထားဘို့ လိုအပ်မှာလဲ။ ........လူကြီးမင်းများကို ကျနော်တခု သတိပေးရပါလိမ့်မယ်.ဒါကတော့ အစောင့်စစ်သားတွေ လှံစွပ်နဲ့ ထောက်ပြီး ၀ိုင်းရံထားတဲ့ ဒီအခန်းကျဉ်းလေးကနေ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဆောင်ရွက်တာဟာ ပညာမဲ့ရာ ကျလွန်းပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ဥပဒေကျင့်ထုံးက .. တရားခွင်ဟာ ပြည်သူ့ရှေ့မှောက်မှာစစ်ရမယ်၊ အများပြည်သူ နားထောင်ခွင့်ရှိရမယ်.. လို့ပြဌာန်းထားတယ်ဆိုတာ ကျနော်သတိပေးပါရစေ။ ခုတော့ တိုင်းသူပြည်သားတွေ အမှုစစ်ဆေးတဲ့ ဒီတရားခွင်နေရာကို မလာရောက်နိုင်အောင် တားမြစ်ခြင်းခံနေရပါတယ်။ ဒီကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတဲ့ ပြည်သူရယ်ဆိုလို့ အစိုးရရှေ့နေ ၂ ယောက်ရယ်၊ ကျနော့ပြောဆိုချက်မှန်သမျှ မရိုက်နှိပ်ဖို့ တားဆီးပြီး ဖြတ်တောက် ပိတ်ပင်ခြင်းခံထားရတဲ့ သတင်းစာတွေက သတင်းထောက် ၆ ယောက်ရယ် သာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော့ရဲ့ တရားနာ ပရိတ်သတ်ဆိုလို့ ဒီအခန်းနဲ့ စင်္ကြ တလျှောက်မှာ ရှိနေတဲ့ စစ်သား စစ်ဗိုလ် ၁၀၀ လောက်သာ ရှိတယ်ဆိုတာ ကျနော်တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လေးလေး နက်နက် နားထောင်မှုနဲ့ ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့မှုကို ကျနော် ကျေးဇူး ဥပကာရ တင်ရှိပါတယ်။ ကျနော့ ဆန္ဒအရ ပြောရရင် ဒီနေရာမှာ၊ ကျနော့ ရှေ့မှာ စစ်တပ်ကြီး တခုလုံးကို ရှိစေချင်ပါတယ်။ တနေ့ကျရင် အာဏာငန်းဖမ်းပြီး အကြင်နာမဲ့တဲ့ လူတစုရဲ့ လက်ချက်ကြောင့်၊ သူတို့ရဲ့စစ်ဝတ်စုံတွေပေါ်မှာ ပေကျံနေ တဲ့ ရှက်ကြောက်ဖွယ်ရာ သွေးစက် သွေးကွက်တွေကို ဒီစစ်တပ်ကြီးက ဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်း ထွက်ပြီး ဆေးကြော သုတ်သင်ပစ်လိုက်ကြပါ လိမ့်မယ်။ ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ စစ်သားတွေရဲ့ ပုခုံးပေါ်မှာ မတရား ဇက်ခွစီးကြတဲ့လူတွေဟာဖြင့် အဲဒီနေ့မှာ ကျဆုံးရမှာ ပါပဲ။ ပြည်သူတွေက ဒီမြင့်မြတ်တဲ့စစ်သားတွေပေါ် ခွစီးထားသူတွေကို ဆောလျင်စွာကပင် ဆွဲချသင့်ပါ တယ်။
(စာမျက်နှာ ၃၀၊ ၃၁၊ ၃၂၊ ၃၃)
ဘယ်ကျူးဘားပြည်သူတွေက သူတို့ရဲ့ဂုဏ်ရောင်ပြောင်မှုကို မထိမ်းသိမ်းပဲ နေပါ့မလဲ
................................................. ကျနောတို့ဟာ တပ်မတော်က စစ်သားရဲဘော်တွေကို ဖိနှိပ်စိုးမိုးသူတွေရဲ့ အလံကိုဖြုတ်ချပြီး၊ လွတ်လပ်ရေးတံခွန်အလ့ကို လွှင့်ထူဖို့ လက်ကမ်းရပါလိမ့်မယ်။ လူတစုရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ဖို့ မဟုတ်ပဲ တမျိုးသားလုံးရဲ့ အဓိက အကျိုးစီးပွားကိုသာ ကာကွယ်ဖို့ လက်ကမ်းရပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ လက်နက်တွေကို နောက်ပြန်လှည့်ပြီး ပြည်သူတွေကို ပစ်ဖို့ မဟုတ်ပဲ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ ရန်သူတွေကို ပစ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေဆိုတာ သူတို့ရဲ့ သွေးရင်းသားရင်း မိဘရင်ေးတွဖြစ်တယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် ပြည်သူတွေနဲ့ လက်တွဲလာ ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ ညီရင်း အကို များ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေက သူတို့ကို မျက်မှန်စိမ်းတပ်ထားပြီး ပြည်သူတေါကို အစိုးရရဲ့ ရန်သူများအဖြစ်ဆန့်ကျင်ခိုင်းတာကို သူတို့ ပြုလုပ်မဲ့အစား၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ ပျောရွှက်ချမ်းမြေ့မှုအတွက်ရယ်၊ ကြီးပွား တိုးတက်ဖို့ အတွက်ရယ် ကိုယ့်အသက်ကို စွန့်လွှတ်စတေးရာမှာ အလွန်မွန်မြတ်ပြီး အလွန်အဖိုးတန်တဲ့ အတွေးအခေါ်ရဲ့နောက်မှာ ချီတက်ဖို့ ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ နောက်မှာ စစ်သားရဲဘော်ပေါင်းများစွာလိုက်လာ လိမ့်မယ်ဆိုတာ သံသယရှိနေသူတွေကို ကျနော်စကား တခွန်းမေးလိုက်ချင်ပါရဲ့.... ...အဘယ်ကျူးဘားပြည်သူဟာ သူတို့ရဲ့ ဂုဏ်ရောင်ပြောင်မှုကို အမြတ်တနိုး မထိမ်းသိန်းတတ်ဖူးလဲ၊ အဘယ်နှလုံးသားဟာ လွတ်လပ်ရေး အရုဏ်ဦးမှာ တက်ကြွတောက်လောက်မှု မရှိဘူးလဲ...........
.။...။.............။..................။...........................။.............. .ပြည်သူလူထုကြီးဟာ ခေတ်မီလက်နက်တွေနဲ့ အကြမ်းဖက် အုပ်စိုးထားတဲ့ လွှမ်းမိုး အုပ်စိုးမှုကို အကူအညီမဲ့ ဖြုတ်လို့မရနိုင်ဘူး ဆိူတဲ့ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်ကို ပျက်ပြားအောင် ကြိုးပမ်းမှုတွေ ရှိလာပါပြီ။ ..........။...........။ ....လက်နက်မဲ့ ပြည်သူတွေကို ခွန်အားချိနဲ့ပြီး အကြွင်းမဲ့အနုံချာဆုံး ဘ၀ ရောက်အောင် အညံ့ခံ အရှုံးပေးအောင်. ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ဗုံးဗုံးကျအောင် စစ်ရေးအင်အားပြပွဲတွေ နဲ့ ဖန်တီးလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူတွေက သူတို့ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ပြန်လည်ရယူမယ်လို့ သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတဲ့ တချိန်မှာတော့ ဘယ်လက်နက်မျိုး၊ ဘယ်လို အကြမ်းဖက်မှုမျိုးကမှ ပြည်သူလူထူကို ချေဖျက် ဟန့်တားလို့ ရမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး၊...။
(စာ ၃၄၊ ၃၅)
...................... ။ ကျနော်တို့ဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ထောက်ခံမှုကို အသေအချာ အာမခံချက်ရရှိထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ပြည်သူတွေလို့ ပြောတဲ့နေရာမှာ စည်းစိမ်ဥစ္စာခံစားနေကြတဲ့ ရွှေမှုန်စား၊ ငွေဇွန်းကိုက်၊ လူ့မလိုင်တွေ ကို မဆိုလိုပါဘူး။ အဲဒီအမျိုးအစားတွေကတော့ ဘယ်လို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ အစိုးရမျိုးကို မဆို၊ ဘယ်လိုအာဏာရှင် စနစ်မျိုးကို မဆို၊ ဘယ်လိုသက်ဦးဆံပိုင်စနစ်မျိုးကိုမဆို၊ ခရီးဦးကြိုဖို့၊ လက်ရှိသခင်အပေါ်ဦးညွတ်ဖို့၊ သူတို့ကိုယ် သူတို့ ရောင်းစားဖို့ အသင့်ရှိနေကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဒီလို ပြည့်တန်ဆာဆန်တဲ့ အလုပ်မျိုးကို ရိုးမြေကျသည့် တိုင်အောင်လုပ်နေကြမှာပါပဲ။ သင်းချိုင်းကုန်းရောက်တဲ့ထိလဲ လုပ်ကြမှာပါပဲ။ လက်ရှိသခင်ကိုဦးညွတ်တဲ့နေရာ မှာသူတို့နဖူးကို မြေကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ထိ တိုင်အောင်ဦးညွတ်ပါလိမ့်မယ်...။ (စာ ၄၆)
ကျနော်တို့ တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲအကြောင်းတွေ ပြောတဲ့နေရာမှာ ကျနော်တို့ဆိုလိုတဲ့ ပြည်သူတွေဆိုတာ ထုထည်ကြီးမားလှတဲ့ အပယ်ခံလူထုကိုဆိုလိုတာပါ။ ဒီလူထုဟာ ကတိပေါင်းများစွာကိုအပေးခံရပြီး၊ အဲဒီကတိ တွေအားလုံး တကယ်တမ်းလက်ဝယ်မရပဲ အနှပ်ခံနေရတဲ့လူထု ဖြစ်ပါတယ်။ ကတိသစ္စာ အဖောက်ကျူးခံရတဲ့ လူထုဖြစ်ပါတယ်။ .................................................။ မျိုးဆက် တဆက်ပြီးတဆက် ဘေးတော်အစဉ်၊ ဘိုးတော်အညွန့် မျိုးစဉ်တလျှောက်လုံး မတရားမှု၊မမျှတမှု အောက်မှာဒုက္ခခံစားခဲ့ရသူတွေ သရော်လှောင်ပြောင် ခံခဲ့ရသူတွေဖြစ်တယ်။ သူတို့ဘ၀မှာ အဖက်ဖက်က အကောင်းဆုံး အပြောင်းအလဲ ကို လိုလားတောင့်တ နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ ဒီပြောင်းလဲမှုတွေရဖို့အတွက်ဆိုရင် ဒီပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့အသက်ကိုပင်ပေးလှူဖို့ အသင့်ရှိကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ တစုံတခုကိုယုံကြည်ပြီဆိုရင်၊ ဒါမှမဟုတ် တစုံတယောက်ကို ယုံကြည်ပြီဆိုရင်၊ အထူးသဖြင့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ယုံကြည်လာပြီဆိုရင်၊ ခောတ်ဟောင်းကို ပြောင်းလဲနိုင်ရေးအတွက်၊ အခြေအနေ ဟောင်းကိုပြောင်းလဲ နိုင်ရေးအတွက် သူတို့ရဲ့ အသက်ကိုပင်ပေးဆပ်ဖို့အသင့်ရှိနေကြပါတယ်။ လုပ်ငန်းတခု ကိုစတင်ဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုရင်၊ ပထမဦးဆုံး အခြေခံလိုအပ်ချက် ကတော့ သစ္စာရှိရေးနဲ့ ယုံကြည်ချက်ရှိရေးတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ (စာ ၃၅၊ ၃၆)
ဒီပြည်သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကြမ်းတမ်းလှတဲ့ ဘ၀ ခရီးတလျှောက်မှာ ကတိလိမ်တွေ၊ သစ္စာဖောက်မှုတွေကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ ကြုံတွေ့နေဆဲလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ကတော့ ...ခင်ဗျားတို့လိုအပ်တာကို ကျွန်တော်တို့ပေးပါ့မယ်လို့... ပြည်သူတွေကိုပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ စွမ်းအားရှိသလောက်တိုက်ပွဲဝင်ပါ။ ဒီလို တိုက်ယူမှ လွတ်မြောက်ရေးနဲ့၊ ပျောရွှင်ချမ်းမြေ့ရေး ဆိုတာဟာ ခင်ဗျားတို့အတွက်ဖြစ်စေရမယ်။လွတ်လပ်ရေးနဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ရေးဆိုတာ တိုက်ရဲသူတွေ အတွက်ပဲ... လို့ပဲ ကျွန်တော် ပြည်သူတွေကို ပြောချင်ပါတယ်..။ (စာ ၃၉)
တိုင်းပြည်ဟာ ဘုရားကယ်ပါ၊ သိကြားကယ်ပါ၊ နတ်ဒေ၀ါ အပေါင်းတို့ ကူညီညာဝိုင်းလို့ မှိုင်းမတော်မူပါလို့ ဒူးထောက်တောင်းပန်နေလို့ မဖြစ်တော့ဘူး၊ ဘယ်ဗေဒင် ဘယ်လက္ခဏာ၊ ဘယ်ထွက်ရပ်ပေါက် အင်းအိုင်ခလဲ ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့မှလဲ ဆက်မသွားနိုင်တော့ဘူး၊ ခေါစာပစ်တဲ့ နည်းနဲ့လဲ မရတော့ဘူး၊ ဗလိနတ်စာကျွေးတဲ့ နည်းနဲ့လဲ မရနိုင်တော့ဘူး။ ကျူးဘားသမ္မတ နိုင်ငံရဲ့ပြသနာဟာကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲဆင်တဲ့နည်းနဲ့ သာလျှင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ကို လွတ်လပ်ရေးတည်ဆောက်ပေးခဲ့သူ၊ လွတ်လပ် သောသမ္မတနိုင်ငံအဖြစ်တည်ဆောက်ပေးခဲ့သူ၊ ကျနော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးပိသုကာတွေလိုသူတို့ရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်မျိုး၊ သူတို့ရဲ့သစ္စာသမာဓိရှိမှုမျိုး၊ သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်မျိုးနဲ့ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင် တိုက်ပွဲဝင် မှသာလျှင် ဒီနိုင်ငံရဲ့ ပြသနာဟာ ပြေလည်လာပါလိမ့်မယ်။
.......... အစိုးရတရပ်ဟာ ပြည်သူတွေကို ကျောထောက်နောက်ခံပြုပြီး အစိုးရဌာန အသီးသီးမှာ ရှိတဲ့ အကျင့်ပျက် စရိုက်ပျက်၊ ဗြူရိုဂရက် အရာရှိဆိုးတွေကို ရှင်းလင်းပစ်ရမယ်၊ ဒီနည်းနဲ့ တမျိုးသားလုံးရဲ့ ကြည်ညိုလေးစားမှုကို ရယူရမယ်၊ ပြီးတော့ တိုင်းပြည်ကို ချက်ချင်း လက်ငင်း စက်မှုနိုင်ငံဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ရမယ်၊ သေနေတဲ့ ကုန်လုပ်အရင်းအနှီးတွေကို သိမ်းပိုက် စုစည်းရမယ်၊ အမျိုးသားဘဏ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဘဏ်၊ တိုးတက်မှုဘဏ်တွေကို ဖွဲ့စည်းပြီး အဲဒီဘဏ်တွေက တဆင့် ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၁၅၀၀ ခန့် ကို လည်ပတ်နေ စေရမယ်၊ ဒီဧရာမ စီမံကိန်းကြီးတွေအတွက် နိုင်ငံရေးလုပ်စားသူတွေကိုဖယ်ရှားပြီး၊ ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာတကယ် အရည်အချင်းပြည့်ဝသူတွေ၊ အကြွင်းမဲ့ တတ်သိနားလည်သူ ပါရဂူတွေ လက်ထဲ ကို အပ်ရပါမယ်....။
ဒီစီမံကိန်းတွေအတွက်၊ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ဘယ်ကငွေရမှာပါလဲ....၊။ အစိုးရပိုင်ဘဏ္ဍာငွေတွေကို အလွဲသုံးစားမှု မှန်သမျှလက်စ သိမ်းပြီးတဲ့အခါ၊ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူစံနစ်တွေ ဖျက်သိမ်းနိုင်တဲ့ခါ၊ ပြည်သူ့ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် လက်ရှိဝယ်ယူနေတဲ့သနတ်တွေ၊ ဗုံးကျဲလေယာဉ်ပျံတွေ၊ တင့်ကားတွေ ၀ယ်စရာ မလိုတော့တဲ့ခါ၊ အစိုးရဟာ ပြည်သူတွေကို သတ်ဖြတ်ရေးထက် ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ပြုစုပျိုးထောင် ပေးရေးက အရေးကြီးတယ်လို့ ယူဆတဲ့ အစိုးရ ရှိလာတဲ့ခါ၊ တောင်ပုံ ယာပုံ သုံးမကုန်အောင်ရှိတဲ့ ကျနော်တို့ ရဲ့ သယံဇာတ ပစ္စည်းတွေကိုအပြည့်အ၀ အသုံးချ လာနိုင်တဲ့ခါ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ဘဏ္ဍာငွေဟာ လိုသည် ထက်ပိုလာမှာ မလွဲပါဘူး။ (စာ-၅၀)
..........................................................................................တကယ့်လူဆန်တဲ့ လူသားတယောက်ဟာ၊ အခွင့်သာတဲ့လမ်းကို ဘယ်တော့မှမရှာဘူး။ တာဝန်ရှိတဲ့လမ်းကိုသာရှာတယ်။ တာဝန်ကျရာလမ်းကိုသာ ရှာတယ် (မာတီ)။........................... (စာ-၅၁)
ပြည်သူတွေကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တဲ့ မြင့်မားတဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုနားလည်လာတဲ့ အခါမှာ ကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ သူရဲကောင်းအဖြစ်ကို သဘောပေါက်လာကြမယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ တကယ့်တိုက်ပွဲကို ဟန့်တား လိုက်တဲ့ အချက်ကတော့ ရုပ်ဝထ္တုပစ္စည်းအခြေအနေ အားနည်းချက်ပါပဲ။...............................
ကျူးဘားပြည်ရဲ့ကျူးဘားအမျိုးသားလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်နဲ့ ရက်စက် ဆိုးသွမ်းတဲ့ မတရားအုပ်စိုးမှုကို ဆန့်ကျင်ပြီး ထကြွတော်လှန်ခဲ့တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတရပ်ဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်က စစ်သားတွေ မသိရှိအောင် အစိုးရက ဖုံးကွယ်ထားတယ်။ သွေးထိုး သွေးခွဲ ထားတယ်။
သေခြင်းနဲ့သာ ဘ၀ကို စတင်မယ်
သွားလေသူ ကျနော့ရဲ့ ရဲဘော်တွေအတွက် ကျဆုံးသွားကြပြီဖြစ်တဲ့ ကျနော့ ရဲဘော်တွေအတွက် ဘယ်လို လက်စား ချေမှုမျိုးကိုမှ ကျနော်မလိုချင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ အသက်တွေက တန်ဖိုး မဖြတ်နိုင် အောင်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လို့ပါပဲ။ လူသတ်သမားတွေဟာ ဒါကို ရင်းစားကျေဘို့အတွက်၊ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အသက်တွေနဲ့ ပေးဆပ်ရင်တောင်မှ ကြွေးမကျေနိုင်ပါဘူး။ တိုင်းပြည်အတွက် သူတို့ရဲ့ အသက်ကို ပေးလှူသွား ကြတဲ့အဖြစ်ကိုသွေးနဲ့ပြန်ဆပ်လို့မကျေနိုင်ပါဘူး။ ပြည်သူတွေအတွက် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့၊သာယာတဲ့ ဘ၀တွေ ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့်သာလျှင် သူတို့ကို အထိုက်တန်ဆုံး ဂုဏ်ပြုချီးကျူးရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော့ရဲဘော်များဟာ မသေပါဘူး။ ဘယ်တော့မှလဲ မေ့ဖျောက်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ ယနေ့တိုင် အသက်ရှင်လျက် ရှိနေပါသေးတယ်။ ခါတိုင်းထက်ပိုပြီး လှုပ်ရှား ရှင်သန်လျက်ရှိပါသေးတယ်။ သူတို့ကို သတ်ခဲ့တဲ့ လူသတ်သမားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အနိုင်မခံ အရှုံးမပေး၊ လှေခွက်ချည်းကျန်အလံမလှဲတဲ့ အောင်ပွဲခံ စိတ်ဓါတ်မျိုးရယ်၊ ဒီစိတ်ဓါတ်မျိုးပေါ်ပေါက်စေခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့ အတွေးအခေါ် ခံယူချက်တွေရယ်ကို အမြဲတမ်း တုန်လှုပ်ချောက်ခြား ဖွယ်ရာကောင်းအောင် ရှုမြင်နေရပါလိမ့်မယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြခဲ့တဲ့ ဂျိုဆေ မာတီရဲ့ စကားကို နားထောင်ကြည့်ကြပါအုံး...
ကျဆုံးသူတွေရဲ့ အုတ်ဂူပေါ်မှာ ကျနော်တို့ငိုစရာမျက်ရည်ဟာအတိုင်းအဆရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ ကျဆုံး သူတွေရဲ့ အုတ်ဂူမှာကျမျက်ရည်မစဲ ဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ အလောင်းတွေပေါ်မှာ ငိုကြွေးတမ်းတနေမဲ့ အစား တိုင်းပြည်အပေါ်မှာထားရှိခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့ အနန္တမေတ္တာနဲ့သူတို့ရဲ့ ထွန်းပြောင်မှုကိုသာ ကျနော်တှို အောက်မေ့ဆင်ခြင်ကြပါစို့။ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ဟာ ဘယ်တော့မှပြိုလဲပျက်စီးမသွားပါဘူး။ ဘယ်တော့မှ ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲ သွားခြင်းလဲ မရှိပါဘူး။ ဘယ်တော့မှ မျှော်လင့်ချက် မကုန်ဆုံးပါဘူး။ ဘယ်တော့မှလဲ မှေး မှိန်မသွားပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ခေတ်မှာအာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေရဲ့ဗိမာန်ဟာ အလှပဆုံး၊ အတောက်ပဆုံးဗိမာန်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲတည်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ ကျေးဇူးရှင်အဖနိုင်ငံရဲ့လက်ပေါ်မှာ အာဇာနည် ရဲဘော်တယောက်ကျဆုံးသွားတဲ့အခါ သေခြင်းတရားဟာ လမ်းဆုံးကိုရောက်သွားပါပြီ။ အဲဒီအခါကျရင် ထောင်နံရံတွေ ပြိုလဲ ပွင့်ထွက်ပြီး နောက်ဆုံးမှာဘ၀သစ်တွေ တဖန်မွေဖွားခြင်းဖြင့် အသစ်စတင် လာပါပြီ။
ဒီအတိုင်းဆိုရင် ကျနော်ဟာ ရှေးပဝေသဏီက သာဓကတွေ၊ အလယ်ခေတ်က ဥပမာတွေ၊ မျက်မှောက် ခေတ်သစ် ရဲ့အစပိုင်းကာလက ဥပမာတွေကိုဖေါ်ပြပြီးခဲ့ပါပြီ။ ဒီဥပမာတွေဟာ ဘာသာအယူဝါဒအားလုံးက စာရေးဆရာတွေရဲ့ ရေးသားချက်တွေထဲ က ကောက်နှုတ်ဖေါ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေထက်ပိုပြီးပြော ရရင်တော့ သူပုန်ထပိုင်ခွင့်ဟာ ကျူးဘားလူမျိုးရယ်လို့ စတင်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ကတည်းက အမြစ်တွယ်လာခဲ့တဲ့ အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၅၀ က ပုန်ကန်မှုတရပ်ရဲ့ ရလာဒ်ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ဟာ ကျူးဘားအမျိုးသား တရားသူကြီးရဲ့ ၀တ်စုံကို ဒီကနေ့ ၀တ်ဆင်လာနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဝတ်ရုံတွေဟာ တရားမျှတမှု အရေးတော်ကို ပေးအပ်ထားတာ မဟုတ်ပါလား......................။
.......................................................... အဲဒီတော့.. မတရားလွှမ်းမိုးအုပ်စိုးမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီး အုံကြွ နိုင်ခွင့်၊ သူပုန်ထနိုင်ခွင့်ဟာ နောက်ဆုံးပိတ် တရားတဲ့ အခွင့်အရေး အဖြစ်ပါရှိလာပါတော့တယ်။ ဒီအခွင့်အရေးဟာ နိုင်ငံရေး လွတ်လပ်ခွင့်ရဲ့ အခြေခံ သဘောတရားလဲ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
နောက်ကြောင်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် ၁၉၄၉ ခုနှစ်က ဂျိုမီလ်တန်ဟာ .. နိုင်ငံရေးအာဏာဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ လက်ထဲမှာရှိတယ်၊ သူတို့ဟာ ဘုရင်တွေကို နန်းတင်နိုင်တယ်၊ နန်းချနိုင်တယ်၊ ပြီးတော့ မတရားဖိနှိပ်စိုးမိုး ချယ်လှယ်သူတွေကို ဖြုတ်ချဘို့ သူတို့တာဝန်ဖြစ်တယ်... လို့ပြောခဲ့တယ်။
ဂျွန်လော့ဒါကတော့ အစိုးရနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သူ့ရဲ့စာတန်းမှာ .. လူတွေရဲ့ သဘာဝ အခွင့်အရေးကို ဖေါက်ကျူးလာတဲ့ခါ ပြည်သူတွေဟာ ဒါကို နှိပ်ကွပ်ဖို့၊ ဒါမှ မဟုတ် အစိုးရကိုပြောင်းလဲ ပြစ်ဖို့ တာဝန်ရှိတိယ်၊ အခွင့်အရေးလဲ ရှိတယ်။ မတရားမှု နဲ့ အာဏာမပိုင်တဲ့ အင်အားစုကို ဆန့်ကျင်ဖို့ နောက်ဆုံးနည်းလမ်းက တော့ အတိုက် အခံ ပြုဖို့ ပါပဲ တဲ့.....။ (စာ ၅၉၊ ၆၀)
ကျော်ကြားလှတဲ့ ပြင်သစ်တို့ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ကျေငြာ စာတမ်းမှာတော့ ..အစိုးရသည် ပြည်သူတို့၏ အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်လာပါလျှင် အုံကြွ ပုန်ကန်မှုသည် ပြည်သူတို့အတွက် အမွန်မြတ်ဆုံးသော အခွင့်အ ရေးဖြစ်တယ်။ ......... တစုံတယောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် အချုပ်အခြာ အာဏာကို သိမ်းပိုက်လုယူပါက ထိုပုဂ္ဂိုလ်အား လွတ်လပ်သည့်ပြည်သူအများစုက သေဒဏ်ပေးရမယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
ကျနော်ဟာ ကျနော်ရဲ့ ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်တွေကို တရားမျှတကြောင်း အလုံအလောက် တင်ပြခဲ့ပြီးပြီလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျနော့ကို ထောင်ထဲမှာ ၂၆ နှစ် အကျဉ်းချထားဖို့ ဂုဏ်သရေရှိ အစိုးရရှေ့နေကြီးက တောင်းဆို လျှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။ သူလျှောက်လဲခဲ့တဲ့ ဆင်ခြေ တွေ ထက် ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်း အကျိုးတရားတွေ ကို ကျနော် လျှောက်လဲခဲ့ပါပြီ။ ပြည်သူတွေရဲ့ လွတ်လပ်မှုနဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှု အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေ ကို အားလုံးက ထောက်ခံကြပါတယ်။ ပြည်သူတွေအပေါ် ဖိနှိပ်သူ၊ အဓမ္မပြုကျင့်သူ၊ အသနား အကြင်နာမဲ့သူ၊ လုယက်ဖျက်ဆီးသူတွေ ကို ဘယ်သူမှ မထောက်ခံပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော်ဟာ ကျိုးကြောင်းတရားတွေ အမြောက်အများနဲ့ တင်ပြလျှောက်လဲ ပြီးဖြစ်တဲ့အပြင် ဒါတွေကိုဂုဏ်သရေရှိ အစိုးရ ရှေ့နေကြီးက ဘာတခုမှ ငြင်းချက် မထုတ်နိုင်ပါဘူး။ လက်ရှိ အာဏာရှိ လူကြီးမင်းများ ဘယ်လို လုပ်တရားတယ် လို့ ဆိုနိုင်ပါ့မလဲ။ သူဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ အလိုနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး အာဏာကို ရရှိခဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ သမ္မတ နိုင်ငံ ရဲ့ တရားဥပဒေကိုဖောက်ကျူးပြီး လက်နက်အင်အား နဲ့ သစ္စာဖောက်မှုကို အသုံးပြု အာဏာ ရရှိလာခဲ့သူ ဖြစ်တယ်။
သွေးချောင်းစီးမှု၊ ဖိနှိပ် ညှင်းပမ်းမှု၊ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ရာ ကောင်းမှုတို့နဲ့ပြည့်နေတဲ့ အစိုးရမျိုးကို တရားဝင် အစိုးရအဖြစ် လူကြီးမင်းတို့ ဘယ်လိုများ သတ်မှတ်နိုင်ပါ့မလဲ။ .....................သူတို့ရဲ့သွေး သူတို့ရဲ့ အသက်သွေးတွေပေးလှူ ပြီး သူတို့ရဲ့ တိုင်းပြည်ကို ကယ်တင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ နိုင်ငံသားတွေကို ထောင်တွေဆီ ပို့ဖို့ တရားရုံးတော်တွေမှာ ဘာအခွင့်အရေး ရှိပါသလဲ။ ဒါတွေ အားလုံးဟာ တမျိုးသားလုံး ရဲ့ မျက်စိထဲမှာတော့ ဧရာမ ယုတ်မာမှုကြီးပါပဲ။ ပြီးတော့ တော်ဖြောင့်မှန်ကန်တဲ့ တရားစီရင်ရေး အခြေခံသဘော တရားအရဆိုရင် ဒါတွေအားလုံးဟာ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ် ကောင်းလှတဲ့ ဧရာမ ဒုစရိုက်မှု ကြီးပါပဲ။
နှစ်ကြိမ်တိုင် အဓမ္မ မတရားပြုကျင့်ခံရတဲ့ တရားစီရင်ရေး
ဂုဏ်သရေရှိ တရားသူကြီးမင်း ခင်ဗျား၊ အပြစ်ကင်းပြီး သာမန်နိုင်ငံသား တယောက် ဖြစ်တဲ့ ကျနော်ဟာ တနေ့သောအခါက တရားဥပဒေ ချိုးဖောက်ပြီး၊ ကျနော်တို့နိုင်ငံ ရဲ့ အခြေခံစည်းမျဉ်း ဥပဒေ ကို အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ဆုတ်ဖြဲ ပစ်ခဲ့တဲ့ အာဏာ ရူးလူတစုအပေါ်အပြစ်ပေးဖို့ ရုံးတ်ာကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချည်းနှီး ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ခုဆိုရင် ကျနော်ဟာ တရားမ၀င်တဲ့ အစိုး ရကို ဖြုတ်ချဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက် တရားဝင် အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်း ဥပဒေ ကို ပြန်လည်ထိမ်းသိမ်းရန် ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက် တရာဒခံ တယောက် ဖြစ်နေရပါပြီ။ ကျနော်ဟာ ၇၆ ရက်တိုင်တိုင် ဘယ်သူနဲ့မှ စကားပြောခွင့် မရှိပဲ အချုပ်ခံခဲ့ရတယ်။ ကျနော့ရဲ့ သားနဲ့တောင်မှ စကားပြောခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ ဒီမြို့တော်တလျှောက် စက်သေနတ်ကြီးတွေ ကိုင်ထားတဲ့ အစောင့် ၂ ယောက်နဲ့ လာခဲ့ရတယ်။ ကျနော့ကို လျှို့ ၀ှက်စွာ စစ်ဆေးဖို့ အစောင့်အကြပ်နဲ့ ပိတ်ဆို့ပြီး၊ ဒီဆေးရုံကို ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ထို ဥပဒေ ကို လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတဲ့ အစိုးရ ရဲ့ ရှေ့နေက ကျနော့ ကို ၂၆ နှစ် ထောင်သွင်း အကျဉ်းချထားရန် စီရင်ချဖို့ ဟန်နဲ့ ပန်နဲ့ တောင်းဆိုလျှောက်လဲနေပါတယ်။ အရင်က ကျနော် ဟာ အာဏာရူး အစိုးရတစုကို တရားစွဲခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တုန်းက ရုံးတော် ဟာ သူပြုသင့်တာကို မပြုနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လက်နက်အင်အားနဲ့ အစိုးရက သူတို့ ကို ပိတ်ပင်ထားခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာနဲ့ တားဆီးထားလို့ အဲဒီတုန်းက တရားမျှတ စွာ လုပ်ဆောင်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ လူကြီးမင်းများ ဖြေကြားကောင်း ဖြေကြားပါလိမ့်မယ်၊ ကောင်းပါပြီ ခင်ဗျား ဒီလို ဆိုရင် ၀န်ခံလိုက်ပါ..။ ဒီတခါတော့ ကျနော့ကို အပြစ်ပေးဖို့ လူကြီးမင်းများ ကို အာဏာနဲ့ အတင်း အဓမ္မ စေခိုင်းလိမ့်မယ်..။ ဒါကို ၀န်ခံပါ..။ ပထမ အကြိမ်တုန်းက အပြစ်ရှိသူကို အပြစ် ပေးနိုင်စွမ်း မရှိခဲ့ပါဘူး.. အခုတော့ လူကြီးမင်းတို့ ဟာ အပြစ်ကင်းသူကို အပြစ်ပေး ရတော့မယ်..။ ဒီလိုသာ ဆိုရင်တော့ တရားစီရင်ရေးကို စောင့်ရှောက်နေတဲ့နတ်သမီးဟာ နှစ်ကြိမ် တိုင်တိုင် အဓမ္မ ပြုကျင့် ခံခဲ့ရပါပြီ။
သမိုင်းက ကျနော့ကို မှတ်ကျောက်တင်ပါလိမ့်မယ်
ကျနော့ရဲ့ ခုခံလျှောက်လဲချက်အယူခံကို နိဂုံးချုပ်ပါတော့မယ်၊ ဒါပေမဲ့ ရှေ့နေတွေပြုလုပ်နေကျအတိုင်း ကျနော် အဆုံးမသတ်ပါဘူး။ ကျနော်ဟာ တရားခံ အဖြစ် လွတ်မြောက်ဖို့ မတောင်းဆိုပါဘူး။ ကျနော့ကို လွှတ်ပါလို့ အယူမခံပါဘူး။ ........................................... လူဆိုး သူခိုး ရာဇ၀တ်ကောင်တယောက်ဟာ ဒီနိုင်ငံမှာ သမ္မတဖြစ်နေလေတော့ သစ္စာသမာဓိ ရှိတဲ့သူတွေဟာ ထောင်ချရင်လဲ ခံရမယ်။ သေရင်လဲ သေရမယ်ဆိုတာ နာူလည် သဘောပေါက်နီိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက် ထောင်ကျတာဟာ ကြမ်းတမ်းသလို ထောင်ဆိုတာဟာ ယုတ်မာတဲ့ ညှင်းပမ်းနှိပစက်မှုတွေ သူရဲဘောကြောင်တဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်လို့နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် ထောင်ကို မကြောက်ပါဘူး။ ကျနော့ ညီအကိုတော်တွေ ရဲ့ အသက်ကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ် ဖျောက်ဖျက်ခဲ့တဲ့၊ စတေးခဲ့တဲ့ မတရား အုပ်စိုး ချယ်လှယ်သူတွေနဲ့ သူတို့ရဲက ဒေါသမီးလျှံ ကို ကျနော် နဲနဲ လေးမှ မဖြုံသလို၊ ထောင်ကိုလဲ ကျနော် မမှုပါဘူး။ ကျနော့ကို ပြစ်ဒဏ် စီရင်ချက်သာ ချလိုက်ပါ။ ကျနော် ဂရုမစိုက်ပါဘူး၊ သမိုင်းကသာ ကျနော့ ကို မှတ်ကျောက်တင်ပါလိမ့်မယ်။
အယ်ဒီတာ့မှတ်ချက်။ ။ စီရင်ချက် ထုတ်သောအခါ ကပ်စထရိုကထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ်အပြစ်ပေးခံခဲ့ရပြီး၊ သူ၏ညီမှာ ထောင်ဒဏ် ၁၃ နှစ် ချမှတ်ခံရသည်။ သို့ရာတွင် ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် အာဏာရှင် ဘာတစ္စတာ က ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန်ကျေငြာခဲ့ပြီး၊ ထိုရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မဲဆွယ်ပွဲ တိုင်းတွင် ကပ်စထရို အား လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုသံက သောသော ညံနေခဲ့ရာ အာဏာရှင်ဘာတစ္စတာမှာ ပြည်သူတို့၏ တောင်းဆိုချက်ကို ကြံ့ကြံ့ မခံနိုင်တော့ပဲ မလွှဲသာ မရှောင်သာဖြင့် ၁၉၅၅ ခု မေလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အမိန့်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ရလေတော့သည်။
ဒီလောက်ရှည် ပို့စ်အရှည်ကြီးကို စိတ်ဝင်တစား စောင့်ဖတ်ခဲ့ကြသူတွေ ကို ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တဲ့ ဒီလျှောက်လဲချက်ရှည်ကြီးကို ကပ်စထရို တင်သွင်းစဉ်က သူ့အသက် ၂၇ နှစ်သာ ရှိပါသေးတယ်။ ဒီလျှောက်လဲချက် မိန့်ခွန်းရှည်ကြီးဟာ အဲဒီခေတ်တုန်းဆီက လွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ ကိုလိုနီ တိုင်းပြည်တွေက လူငယ်တွေ နဲ့ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူတွေအတွက် တန်ဖိုး ကြီးလှတဲ့ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ အဆိုအမိန့်တွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အာဏာရှင်တွေ အုပ်စိုးနေတဲ့ တိုင်းပြည်တွေက အစိုးရတွေ အတွက် ရှက်လန့်တကြား၊ ကြောက်လန့်တကြား ဖြစ်သွားစေခဲ့တဲ့လျှောက်လဲချက်ရှည်ဆိုလဲ မှားမယ် မထင်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ လျှောက်လဲ ချက်က ၅ နာရီကျော်ကြာ်ခဲ့တာမို့ ကမ္ဘာပေါ်က အရှည်ကြာဆုံးလျှောက်လဲချက်တွေထဲက တခုအပါ အ၀င်ပါ။ ကျမအနေနဲ့ ကတော့ အဲဒီအထဲကမှ ကျမနှစ်သက် တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကိုပဲ ကောက်နှုတ်တင်ပြခဲ့တာပါ။ ဒီလျှောက်လဲချက်ရှည် ကြီးကို English လို မူရင်းအတိုင်း ဖတ်ချင်ရင်တော့ ကျမတင်ပြထားခဲ့တဲ့ အပိုင်း (၂) မှာ မှတ်ချက်ဝင်ပေးသွားတဲ့ ကိုမျိုးမြင့်မောင် ရဲ့ မှတ်ချက်ထဲက အတိုင်း ဒီမှာ (http://www.marxists.org/history/cuba/archive/castro/1953/10/16.htm) သွား ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Posted by မမသီရိ at 6/16/2009 06:26:00 PM
ကော်ဖီ ၃ ခွက်ကြောင့်လို့ တော့
ငါ .. သောက်မိတယ်.. ဒီတခွက်
ငါ .. သောက်မိတယ် နောက်တခွက်
ငါ.. ထပ်သောက်မိတယ် နောက်တခွက်..
ရူးခဲ့တာ မင်းကြောင့် ကွဲ့... ကောင်လေးရဲ့....
သန်းခေါင်ယံ တွန်တဲ့ ကြက်သံ.
ညဉ့် နှစ်ယံကျော်တဲ့ထိ အိပ်မပျော်.
ကြယ်ကလေးတွေက တို့ အဖော်...
အဲဒါ မင်းကြောင့်ပဲ ကောင်လေးရဲ့
ငါ့ . ရင်တွေ ခုန်နေတယ်..
ပုံတွေရတဲ့ နေရာ .......www.catherineartcorner.com/Paintings.html
Posted by မမသီရိ at 6/15/2009 01:11:00 PM